देशभर प्रेसर कुकर बमको आतंक : बम र आगजनीले जनजीवन प्रभावित ! कहाँ के भेटियो ? – Kumbha Khabar
देशभर प्रेसर कुकर बमको आतंक : बम र आगजनीले जनजीवन प्रभावित ! कहाँ के भेटियो ?
काठमाडौँ – नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव) समूहले आव्हान गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव देशभर परेको छ। बन्दको कारण सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन मात्र नभई शैक्षिक संस्था समेत प्रभावित भएका छन्।
बन्द आह्वान गरेको अघिल्लो दिन देशका विभिन्न भागमा शङ्कास्पद वस्तु भेटिनुका साथै बम बिष्फोट भएपछि आम-सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ। जस कारण अघिल्ला बन्द भन्दा सोमबारको बन्दले धेरै प्रभाव पारेको छ।
सोमबार बिहानै देखि विभिन्न ठाउँमा विष्फोटक पदार्थ र शंकास्पद वस्तु फेला परिरहेका छन्। केहि ठाउँमा विप्लव कार्यकर्ताले सवारी साधनमा आगजनी समेत गरेका छन्।
उपत्यकासहित देशभरका सडकमा साविकका बन्द भन्दा धेरै कम सवारी चलेका छन्। बन्दका कारण काठमाडौंभित्र चल्ने छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी समेत कम चलेको प्रहरीले जनाएको छ। बन्दलाई मध्येनजर गर्दै सडक, चोकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू खटाइएको छ।
कुन ठाउँमा के भयो ?
पोखराको विभिन्न तीन ठाउँमा आज बिहान शङ्कास्पद वस्तु भेटिएको छ । सिर्जनाचोक र फिर्केचोकको बीचमा एनसेल कार्यालय नजिक, दरबारमार्गस्थित एक पार्टी प्यालेसनजिक र नारेश्वरचोकस्थित सडकको पेटीका शङ्कास्पद वस्तु देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। ती शङ्कास्पद वस्तु राखिएको क्षेत्रलाई सुरक्षाकर्मीले आफ्नो नियन्त्रणमा लिसकेको छ। पोखरामा बन्दको प्रभाव परेको छ। सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन बिहानैदेखि गुडेका छैनन् र शैक्षिक संस्थामा पनि बन्द छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार हतियारसहित आएका विप्लवका कार्यकर्ताले चालक, सहचालक र बसधनीलाई झारेर पेट्रोल छर्केर आगजनी गरेका थिए । आगजनीबाट बस पूर्णरुपमा क्षति भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीपबहादुर क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । बस जेलेको ठाउँ नजिकै शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ ।
कपिलवस्तुको वाणगंगाका दुई स्थानमा बम फेला परेको छ। बन्दका कारण कपिलवस्तुमा पनि जन-जीवन प्रभावित भएको छ। सवारी साधन चलेका छैनन् भने शैक्षिक संस्था समेत बन्द छन्।
रौतहटमा बिहानै प्रेसरकुकर बम फेला परेको छ। प्रहरीका अनुसार रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर मुख्य चोकमा पनि प्रेसरकुकर बम फेला हो। नेपाली सेनाको डिस्पोजल टोलि त्यहाँ पुगिसकेको बताइएको छ।
धादिङमा समेत विस्फोटक पदार्थ फेला परेको छ । धादिङको महादेवबेंशी पुलमा भेटिएको विस्फोटक पदार्थलाई नेपाली सेनाको निस्क्रिय परिसकेको बताइएको छ।
मोरङको छुट्टा-छुट्टै ठाउँमा शंकास्पद वस्तु भेटिएका छन्। मोरङको सुन्दरहरैंचा ७ ठडिया चोकमा पनि प्रेसर कुकर बम फेला परेकाे हो। जसलाई सेनाको टोलीले निष्कृय परिसकेको छ। बुढिगंगा गाउँपालिका–१ आरती स्ट्रिप्स छेउमा बम जस्तो देखिने शकास्पद वस्तु फेला परेको र सेनाको बम डिस्पोजल टोली त्यस तर्फ जाँदै गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
मकवानपुर स्थिति थाहा नगरपालिका-१ कुन्छाल नजिकै ना ६ ख ८००७ नम्बरको आइचर गाडीमा विप्लव कार्यकर्ताले आगजनी गरेका छन्। बिहान ४ बजेको समयमा गाडी जलाइएको हो।
यस्तै हेटाैंडाकाे चाैकीटाेलमा ७ ख ९४९३ नम्बरकाे मिनी ट्रकमा पनि आगजनी भएको छ। हेटौँडाकै बुद्धचोक नजिक प्रेसर कुकर बम समेत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रेसर कुकर बम नेपाली सेनाले डिस्पोज गरिसकेको छ।
बारामा पनि बिहानै एक भारतीय ट्रकमा आगजनी भएको छ। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-३, बजनीमा आइतबार बिहान रोकिराखेको भारतीय लरीमा आगजनी भएको हो। नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पाइप बोकोर आइरहेको एपी ३१ एक्स ६३१६ नम्बरको ट्रकमा आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ।
नवलपुरमा एक ट्रक माथि बम प्रहार भएको छ। नवलपुरको अरुणखोला पुल नजिकै लु २ ख १०८ नम्बरको ट्रकमा पेट्रोल बम प्रहार भएको हो। ट्रक माथि पेट्रोल बम प्रहार भएको र चालक घाइते भएको बताइएको छ।
अर्घाखाँचीकाे सन्धीखर्कस्थि आवासीय माविमा शंकास्पद वस्तु फेला परेकाे प्रहरीले जनाएको छ।
बाग्लुङमा पनि बिहानै शंकास्पद वस्तु फेला परेको छ। शंकास्पद वस्तुलाई नेपाली सेनाकाे टाेलीले निष्कृय पारेको बताइएको छ।